### Zawgyi Version ### အိမ်ထောင်စုတစ်ခု သာယာချမ်းမြေ့ဖို့ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ချန်လှပ်၍မဖြစ်။ လာဘ်လာဘတွေ ပွင့်လန်းနေပါမှ လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝစွာ ဖန်တီးနိုင်လျက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေလိမ့်မည်သာ ဖြစ်၏။ “အလုပ်လည်း ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှ ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ...
### Zawgyi Version ### တချို့အိမ်များတွင် စကြာရောင်စုံလေးများကို အိမ်ရှေ့တွင် ထိုးထားတာ မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ထိုစကြာလေးများကို အဆောင်အနေနဲ့ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက မည်သို့ အကျိုးရှိစေနိုင်ပါသနည်း။ စကြာသည် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိသော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စကြာလေးသည်...
အိမ်ထောင် သုံးဆက်ကျခဲ့သည့် မိခင်ပိုင် အိမ်နှင့် မြေကို ၀ယ်မည်ဆိုလျှင်
### Zawgyi Version ### “မင်္ဂလာပါ ဆရာ”ဟု နှုတ်ခွန်းဆက်သံကြောင့် ရုံးခန်း၌ စာရေးနေ သော စာရေးသူသည် အသံလာရာသို့ မော့ကြည့်လိုက်သည်။ “လာဗျာ ဦးသက်နိုင် မရောက်တာကြာပြီနော်” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စရာရှိမှပဲ ဆရာ့ဆီရောက်လာတော့တယ်” ဦးသက်နိုင်သည် အိမ် ခြံ...
### Zawgyi Version ### အိမ်ခြံမြေဝယ်သူအများစုက အမှန်တကယ်နေထိုင်ဖို့ ဝယ်သူတွေဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေဝယ်တဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့အရာတချို့ ရှိပါတယ်။ အမည်ပေါက်ဆီက ဝယ်ရင် ဂရန်နာမည်ပေါက်ဆီက ဝယ်ရင် အလုပ်မရှုပ်တော့ပါဘူး။ နာမည်ပေါက်က ဂရန်မြေပုံကူးယူ၊...
### Zawgyi Version ### ကျွန်ုပ်ဧ။်အဘိုးတစ်ဦးသည် ကုန်ထမ်းသောအလုပ်ဖြင့် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအသက်မွေးရလေဧ။်သို့ရာတွင် ၄င်းဧ။်အိမ်ကလေးမှာမူ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် အတော်ကလေးတန်ဖိုးကြီးလေဧ။်။အမွေရထားသောအိမ်ကလေးဖြစ်၏ ။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုအိမ်ကလေးကို မထုခွဲရက်ပဲ...
ပထမဇနီးကွယ်လွန်ပြီးမှ မွေးစားခံရသော သားသမီးသည် မွေးစားဖခင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသော် အမွေရခွင့်ရှိပါသလား ?...
### Zawgyi Version ### ရုံးခန်းသို့ စာရေးသူရောက် သည့်အခါ ကျောင်းနေဖက်ငယ်သူ ငယ်ချင်း ဦးတင်မြင့်ကို တွေ့ရသည်။ “သူငယ်ချင်း ရောက်နေတာ ကြာပြီလား”ဟု စာရေးသူက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ “မကြာသေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တရားရုံးမသွားမီ အရောက်လာခဲ့တာ” “လာ...
### Zawgyi Version ### အပျောက်တိုက်ခန်းဆိုသည်မှာ ယင်းတိုက်ခန်းအား တန်ဖိုးတစ်ရပ်ဖြင့်ပေးဝယ်၍ နေထိုင်ခွင့်နှင့် ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း၊ ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသော အိမ်ငှားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၀ခုနှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်သဖြင့်...
အပျောက်တိုက်ခန်းကို ၀ယ်ယူထားသူများသည် အဆောက်အဦ ခိုင်ခံ့မှုမရှိသည့်အခါ၊ ပြိုကျပျက်ဆီးသည့်အခါ အခန်းပြန်လည်ရရှိနိုင်သလား။ အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦ ဆိုတာဘာလဲ။...
### Zawgyi Version ### အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦ DB (Dangerous Building)မှာ အချိန်မရွေး ပြိုကျနိုင်ပြီး နေထိုင်သူနှင့် အနီးအနားရှိသည့်လူများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အဆောက်အဦကို ခေါ်ပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦကို အိမ်ရှင်မှလည်းကောင်း၊ နေထိုင်သူမှလည်းကောင်း၊...
မြေကွက်အမည်ပေါက် မှန် / မမှန် စိစစ်ပေးရေး လျှောက်ထားခြင်း
### Zawgyi Version ### မြေကွက်အမည်ပေါက်စစ်ဆေးချင်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၀ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော YCDC.gov.mm တွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ‌ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (၁) လျှောက်ထားသူ အချက်အလက် - အမည် -...
အပျောက်စနစ်တိုက်ခန်းများတွင် အိမ်ငှါးကွယ်လွန်သွားပါက တိုက်ခန်းကို မြေရှင် ရပိုင်ခွင့် ရှိပါသလား ?...
### Zawgyi Version ### “ ဆရာ ဦးကျော်ဝင်း ရောက်နေတာကြာပြီလား ” ဟု စာရေးသူက မိမိ၏ ရုံးခန်းရှေ့တွင် ရောက်နှင့်နေသည့် ဆရာဦးကျော်ဝင်းကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်စာရေးသူနှင့် ဆရာဦးကျော်ဝင်းတို့သည် စာရေးသူ၏ ရုံးခန်းအတွင်း၌...